Laba qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday Hyatt Ziva Riviera Cancun
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Laba qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday Hyatt Ziva Riviera Cancun
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Crime • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Mexico • News • Dadka • jiga • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Laba qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday Hyatt Ziva Riviera Cancun.
Xoghaynta amniga dadwaynaha ee gobolka Quintana Roo ee dalka Mexico ayaa sheegtay in laba qof oo loo malaynayo in ay ka ganacsadaan daroogada la dilay balse waxa ay intaa ku dartay in aanay jirin wax dalxiisayaal ah oo si xun loo dhaawacay ama la afduubay.
Toogashada ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhacday agagaarka hotel 5-star Cancun galabnimadii Khamiista.
Martida dalxiiska ayaa waxaa qariyay shaqaale ka tirsan Hyatt Ziva Riviera Cancun iyadoo la soo sheegayo in rasaastu dhacday.
Warka Mexico ayaa sheegay in hal dalxiise laga daweeyay "dhaawac fudud" oo aan la cayimin ka dib dhacdada.
Toogashada ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhacday agagaarka 5-xiddigle Hyatt Ziva Riviera Cancun miciinka galay Mexico galabnimadii Khamiista.
Sida ay sheegayaan warar is khilaafsan, nin hubeysan ama dabley ayaa u soo dhawaaday goobta loo dalxiis tago oo ah meel ay u dalxiis tagaan dadka Mareykanka ah, iyagoo ka yimid xeebta ku dhow oo ay rasaas bilaabeen.
Martidii iyo shaqaalihii ayaa shaqaaluhu ku soo yaaceen si ay u dhuuntaan iyadoo la soo sheegayo in ay israsaasayn dhacday.
Marti argagaxsan ayaa tilmaamay hal nin oo hubaysan oo u soo dhawaaday goobtii loo tamashlahayd ee cidlada ahayd ee xeebta ka socotay oo rasaas ku furay ciyaar kubbadda laliska ah. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in toogashada ama dadka toogashada geystay ay wateen "qoryaha mashiinada" markii ay ku soo dhacayeen goobta dalxiiska.
Ugu yaraan laba qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha burcadda ah ayaa lagu dilay israsaaseyn ka dhacday xarunta wasaaradda amniga ee dowladda MexicoGobolka Quintana Roo ayaa yidhi.
Sida laga soo xigtay saraakiisha gobolka, laba qof oo loo malaynayo inay ahaayeen kuwa daroogada ka ganacsada ayaa la dilay laakiin ma jiro dalxiisayaal si xun loo dhaawacay ama la afduubay.
Xeer ilaaliyaha guud ee gobolka ayaa markii dambe xaqiijiyay in falkan uu ahaa mid ay israsaasaynayeen kooxo burcad ah, isagoo sheegay in ay ka dhacday meel xeeb ah oo wax yar u jirta goobta loo dalxiis tago.
Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta maxalliga ah, hal dalxiise ayaa lagu daweeyay "dhaawac yar" oo aan la cayimin ka dib dhacdada.
Saacad gudaheed markii ay israsaaseyntu socotay, martida waxaa loo oggolaaday in ay ku soo laabtaan soo dhaweynta hoteelka.
Af hayeenka Hyatt Ziva Riviera Cancun ayaa sheegay in shaqaalaha hoteelka " isla markiiba ay la falgaleen mas'uuliyiinta maxalliga ah" kuwaas oo la sheegay in ay ku sugan yihiin goobta baaritaanka.
Safaaradda Mareykanka ee Mexico ayaa sheegay inay eegayaan wararka ku saabsan toogashada.
Toogasho burcad looga shakisan yahay oo ka dhacday goob kale oo caan ah oo ku taal Tulum, oo 80 mayl koonfur ka xigta Cancun, ayaa sababtay dhimashada laba dalxiisayaal ajnabi ah iyo saddex kale oo dhaawac ah bishii hore, ka dib ciidamada ammaanka Mexico ayaa loo diray si ay u taageeraan maamulka maxalliga ah.
Waxay daba socotay dhacdooyin xiriir ah oo la xiriira baandada oo ka dhacay gobolka, oo ay ku jirto dil sarkaal booliis ah oo lagu dilay magaalada Playa del Carmen ee u dhow dabayaaqadii Oktoobar.